Kuroorana Chipo Chinobva Kuna Mwari Ane Rudo | Rudo rwaMwari
Kuroorana Chipo Chinobva Kuna Mwari Ane Rudo
“Tambo yakakoswa netambo nhatu haingakurumidzi kudambuka.”—MUPARIDZI 4:12.
1, 2. (a) Dzimwe nguva tingazvibvunza kutii nezvevanhu vanenge vachangoroorana, uye nei? (b) Mibvunzo ipi yatichakurukura muchitsauko chino?
UNOFARIRA kuenda kumichato here? Vakawanda vanofarira kuendako nokuti zviitiko zvakadaro zvinowanzonakidza zvikuru. Unoona vari kuchata vacho vakachena zvekuchena zviya. Kuzoti zviso zvavo, haiwa mufaro woga woga! Pazuva iroro vose vanenge vachingonyemwerera, uye zvinoita sokuti vacharamba vachingofara kwoupenyu hwose.
2 Kunyange zvakadaro, tose tinobvuma kuti mazuva ano mudzimba dzakawanda hamuna chakanaka. Kunyange zvazvo tichida kuti zvinhu zvifambire zvakanaka vanhu vachangoroorana, dzimwe nguva tinombozvibvunza kuti: ‘Vachafara here mumba mavo? Ichamira here imba iyi?’ Mhinduro dzemibvunzo iyoyo dzichabva pakuti murume wacho nomudzimai wake vachavimba nemazano aMwari voashandisa kana kuti kwete. (Verenga Zvirevo 3:5, 6.) Vanofanira kudaro kuti varambe vari murudo rwaMwari. Iye zvino ngationei mhinduro dzeBhaibheri dzemibvunzo iyi mina: Sei munhu achiroora kana kuroorwa? Kana uchida kuroora kana kuroorwa, ungasarudza munhu akaita sei? Ungagadzirira sei kuti imba yako izomira? Chii chingabatsira vanhu vakaroorana kuti vazogara vachifara?
SEI MUNHU ACHIROORA KANA KUROORWA?
3. Nei kungava kusachenjera kuti munhu achate nezvikonzero zvenhando?
3 Vamwe vanofunga kuti, kuti munhu afare anofanira kuroora kana kuti kuroorwa, zvokuti kana asina haagutsikani uye haambofari. Ichi hachisi chokwadi! Jesu, uyo aive asina kuroora, akati kusaroora chipo uye akakurudzira vaya vanozvikwanisa kuti vagare havo vakadaro. (Mateu 19:11, 12) Muapostora Pauro akakurukurawo zvakanakira kusaroora kana kusaroorwa. (1 VaKorinde 7:32-38) Jesu naPauro havana kupa mutemo panyaya iyi, asi chokwadi ndechokuti ‘kurambidza kuroorana’ kunotova imwe ‘yedzidziso dzemadhimoni.’ (1 Timoti 4:1-3) Kunyange zvakadaro kusaroora kana kusaroorwa kune zvakawanda zvakunobatsira vaya vanoda kushumira Jehovha vasina zvinovakanganisa. Saka kungava kusachenjera kuti munhu achate nezvikonzero zvenhando zvakadai sokutevedzera vamwe.
4. Kana vakaroorana vachipindirana zvinobatsira sei pakurera vana?
4 Asi pane zvikonzero zvinonzwisisika here zvokuti munhu aroore? Zviripo. Kuroorana chimwewo chipo chinobva kuna Mwari wedu ane rudo. (Verenga Genesisi 2:18.) Saka kune zvimwe zvakwakanakira uye kunogona kuita kuti vanhu vafare. Somuenzaniso, kana vakaroorana vachipindirana, mhuri inobva yava nepokutangira pakanakisisa. Vana vanoda kurerwa mumba mune vabereki vanogarisana zvakanaka, vachidiwa, vachirangwa, uye vachitungamirirwa. (Pisarema 127:3; VaEfeso 6:1-4) Zvisinei vanhu havangoroorani kuti vave nevana chete.
5, 6. (a) Maererano naMuparidzi 4:9-12, ndezvipi zvimwe zvakanakira ushamwari hwepedyo? (b) Imba ingava sei setambo yakakoswa netambo nhatu?
5 Cherechedza mashoko anotanga ataurwa tisati tasvika parugwaro rwuri kutungamirira chitsauko chino: “Vaviri vari nani kupfuura mumwe chete, nokuti vane mubayiro wakanaka pabasa ravo rakaoma. Nokuti kana mumwe wavo akawa, mumwe wacho anogona kusimudza mumwe wake. Asi chii chingaitika kana mumwe chete akawa pasina mumwe angamusimudza? Uyezve, kana vaviri vakarara pamwe chete, vachadziyirwawo; asi mumwe chete angadziyirwa sei? Kana mumwe munhu achikwanisa kukunda mumwe munhu ari oga, vaviri vari pamwe chete vanogona kumurwisa.” Irwo rwunozoti, “Tambo yakakoswa netambo nhatu haingakurumidzi kudambuka.”—Muparidzi 4:9-12.
6 Ndima idzi dziri kunyanya kutaura nezvokukosha kwoushamwari. Chokwadi, vanhu vakaroorana vanofanira kuva shamwari dzepedyo. Sezvinoratidza rugwaro urwu, ushamwari hwakadaro hunofanira kubatsira, kunyaradza uye kudzivirira. Imba inonyanya kusimba kana ikasava yevanhu vaviri chete. Sezviri kurehwa nendima, tambo yakakoswa netambo mbiri inogona kudambuka. Asi kana dziri nhatu, dzakakoswa kana kuti dzakarukwa, dzakaoma kudambura. Kana murume nomudzimai vachikoshesa kufadza Jehovha, imba yavo inenge yakaita setambo iyoyo yakakoswa netambo nhatu. Jehovha anenge achitova mumwe wavo mumba imomo, saka ushamwari hwavo hwakasimba zvikuru.
7, 8. (a) Pauro akanyora zano rokutii nezvevanhu vasina kuroora kana kuroorwa vanonetswa nokunzwa kuda kurara nomunhu? (b) Nezvokuroorana, Bhaibheri rinotaura sei zvinhu sezvazviri?
7 Kuroorana kunopawo vanhu mukana, unova ndiwo woga wakarurama, wokugutsa zvido zvavo zvepabonde. Pavaviri vakaroorana, kusangana pabonde zvechokwadi kunofadza. (Zvirevo 5:18) Kunzwa kuda kurara nomunhu kunogona kuramba kuchinetsa mumwe munhu, kunyange adarika rinonzi neBhaibheri zera ‘rokuyaruka,’ kureva nguva yekuti kunzwa kwacho kunenge kwanyanya kusimba. Shungu idzodzo dzikasadzorwa dzinogona kuita kuti munhu aite zvisina kuchena kana kuti zvisina kukodzera. Pauro akafemerwa kunyora zano iri nezvevanhu vasati varoora: “Kana vasingakwanisi kuzvidzora, ngavaroore kana kuroorwa, nokuti zviri nani kuroora kana kuroorwa pane kutsva.”—1 VaKorinde 7:9, 36; Jakobho 1:15.
8 Pasinei nezvikonzero zvingaita kuti munhu aroore, anofanira kuona zvinhu sezvazviri. Semanyorerwo azvakaitwa naPauro, vaya vanoroora kana kuroorwa “vachava nedambudziko munyama yavo.” (1 VaKorinde 7:28) Vanhu vane dzimba vanosangana nematambudziko asingasangani nevasina. Zvisinei, kana ukasarudza kuva nemba, ungaderedza sei matambudziko acho uye wowedzera mufaro wako? Imwe nzira ndeyokungwarira pakusarudza wokuroorana naye.
UNGAZIVA SEI MUNHU AKANAKA WOKUROORANA NAYE?
9, 10. (a) Pauro akafananidza nechii kuipa kwazvakaita kuzvibatanidza nevanhu vasingatendi? (b) Chii chinowanzoitika kana munhu akasateerera zano raMwari oroorana nomunhu asingatendi?
9 Pauro akafemerwa kuti anyore mashoko anokosha anotungamirira pakusarudza wokuroorana naye anoti: “Musasungwa zvisina kukodzera pajoko nevasingatendi.” (2 VaKorinde 6:14) Mufananidzo wake wakanga uchibva pane zvaiitwa pakurima. Kana mhuka mbiri dzine ukuru kana simba rakasiyana zvikuru dzikabopwa pamwe chete, dzose dzinonetseka. Ndizvo zvazvinoitawo kana munhu anotenda akaroorana neasingatendi, vanototi vadhonzerane. Kana mumwe wacho achida kuramba ari murudo rwaJehovha, uyuwo asina kana nebasa nazvo, zvinhu zvavanokoshesa zvinobva zvapesana, uye kazhinji kacho panova nemakakatanwa. Ndosaka Pauro akakurudzira vaKristu kuroora kana kuroorwa “munaShe chete.”—1 VaKorinde 7:39.
10 Dzimwe nguva, vaKristu vasina kuroora kana kuroorwa vakasvika pakuti kusungwa zvisina kufanira kuri nani pane kugara vakasurukirwa. Vamwe vanosarudza kusateerera zano reBhaibheri, voroorana nomunhu asingashumiri Jehovha. Kazhinji kacho, zvinovaipira. Vanhu vakadaro vanozoona kuti havagoni kutaura newavakaroorana naye nezvezvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe zvose muupenyu. Vangatozosurukirwa zvikuru kupfuura zvavakanga vakaita vasati varoorana naye. Chinofadza ndechokuti kune zviuru zvevaKristu vasina kuroora kana kuroorwa zvinovimba uye zvinonyatsotevedzera zano raMwari panyaya iyi. (Verenga Pisarema 32:8.) Kunyange zvazvo vachitarisira kuti rimwe zuva vachazochata, vanoramba vakadaro kusvikira vawana wokuroorana naye pakati pevanhu vanonamata Jehovha Mwari.
11. Chii chingakubatsira kungwarira pakusarudza wokuroorana naye? (Onawo bhokisi rakanzi “ Ndinoda Kuroorana Nomunhu Akaita Sei?”)
11 Hazvirevi hazvo kuti munhu wose akangonzi munamati waJehovha atokodzera kuroorana naye. Kana uri kutsvaga wokuroorana naye, tarisa munhu waunowirirana naye paunhu, pazvinangwa zvokunamata, uye pakuda Mwari. Muranda akatendeka, akangwara akanyora nyaya dzakawanda nezvekutsvaga munhu wekuroorana naye, uye ungaita zvakanaka ukanyengetera woverenga mazano akadaro anobva muMagwaro, uchiita kuti akutungamirire pakusarudza uku kunokosha. *—Verenga Pisarema 119:105.
12. Itsika ipi inoitwa munyika dzakawanda pakuroorana, uye Bhaibheri rine muenzaniso upi unobatsira?
12 Munyika dzakawanda mune tsika dzokuti vabereki vanosarudzira mwana wavo wokuroorana naye. Vakawanda munyika idzodzo vanoti vabereki vane uchenjeri hwakakura uye vabva kure noupenyu saka vanogona kusarudza panyaya iyi inokosha. Imba yevanhu vanenge vaita zvokubatanidzwa nevabereki inowanzobudirira, sezvazvaingoita munguva dzeBhaibheri. Muenzaniso waAbrahamu wokutuma muranda wake kunotsvakira Isaka mudzimai unodzidzisa vabereki vanenge vachikwanisa kuita izvozvo nhasi. Abrahamu aisakoshesa kuva nemari kana mukurumbira. Asi akaita zvose zvaaikwanisa kuti Isaka anotsvagirwa mudzimai pakati pevanhu vainamata Jehovha. *—Genesisi 24:3, 67.
NDINODA KUROORANA NOMUNHU AKAITA SEI?
Rugwaro rwungakutungamirira: “Vaviri vacho vachava nyama imwe.”—Mateu 19:5.
Nei zvichikosha kuti nditange ‘ndayaruka’ ndisati ndaroora kana kuroorwa?—1 VaKorinde 7:36; 13:11; Mateu 19:4, 5.
Kunyange zvazvo ndasvika pazera rokuroora kana kuroorwa, zvichandibatsira sei ndikamboti garei?—1 VaKorinde 7:32-34, 37, 38.
Kana ndikasarudza kuroora kana kuroorwa, nei zvichikosha kuti wandinoroorana naye wacho ange aratidza kuti mushumiri waJehovha akatendeka kwenguva yakati rebei?—1 VaKorinde 7:39.
Magwaro anotevera angabatsira sei hanzvadzi kuziva zvokutarisa pamukomana wokuroorwa naye?—Pisarema 119:97; 1 Timoti 3:1-7.
Zvirevo 31:10-31 ingabatsira sei hama kusarudza nokungwarira musikana wokuroora?
UNGAGADZIRIRA SEI KUTI IMBA YAKO IZOMIRA?
13-15. (a) Mashoko ari pana Zvirevo 24:27 angabatsira sei mukomana ari kufunga zvokuroora? (b) Musikana angaita sei kuti agadzirire kuva nemba?
13 Kana wanyatsoda zvemba, zvakanaka kuti uzvibvunze kuti, ‘Ndanyatsogadzirira here?’ Mhinduro yacho haisi pakuti uri kunzwa sei nezverudo, zvepabonde, ushamwari, kana kuti kuva nevana. Asi, pane zvinhu zvokufunga nezvazvo zvinotarisirwa murume kana mukadzi ari kufunga zvemba.
14 Mukomana ari kutsvaka musikana wokuroora anofanira kufungisisa nezvemashoko aya: “Gadzirira basa rako kunze, urigadzirire mumunda. Pashure uvakewo imba yako.” (Zvirevo 24:27) Chii chiri kurehwa? Mumazuva iwayo, murume paaida ‘kuvaka imba’ yake kana kuti kuroora, aifanira kuzvibvunza kuti, ‘Ndakagadzirira kuriritira mudzimai nevana vatingazova navo here?’ Aifanira kutanga ashanda, achirima muminda yake. Ndizvo zvinofanira kuitwawo nhasi. Murume anoda kuroora anofanira kugadzirira kuva baba vemba. Chero bedzi aine utano, anenge achifanira kushanda. Shoko raMwari rinoti kana murume asingapi mhuri yake zvainoda, asina hanya nokuti iri kunzwa sei uye asingaitungamiriri pakunamata, akaipa kupfuura munhu asingatendi!—Verenga 1 Timoti 5:8.
15 Mudzimai anosarudza kuroorwa anenge achibvumawo kuzoita mamwe mabasa anorema. Bhaibheri rinorumbidza humwe unyanzvi uye unhu hwakanaka hungava nomudzimai sezvaanobatsira murume wake uye achichengeta mhuri yake. (Zvirevo 31:10-31) Varume nevakadzi vanomhanyirira dzimba vanenge vachingozvifunga ivo chete, vasingafungi kuti zvii zvavachaitirawo wavanenge varoorana naye. Zvisinei, chinokosha kupfuura zvose ndechokuti vari kuda kuroorana vave vakagadzirira kushandisa zvinotaurwa naMwari mumba mavo.
16, 17. Vaya vari kugadzirira kuva nemba vanofanira kufungisisa mashoko api ari muMagwaro?
16 Kugadzirira kuva nemba kunosanganisira kufungisisa zvinotarisirwa naMwari kuti murume nomudzimai vaite mumba. Murume anofanira kuziva zvazvinoreva kuva musoro wemba yechiKristu. Kuva musoro hakurevi kuti anofanira kuva mudzvinyiriri. Asi anofanira kutevedzera zvinoitwa naJesu somusoro. (VaEfeso 5:23) Saizvozvowo, mukadzi wechiKristu anofanira kunzwisisa basa rinoremekedzwa raamai vemba. Achada kuzviisa pasi ‘pomutemo womurume wake’ here? (VaRoma 7:2) Iye zvino anotova pasi pomutemo waJehovha uye waKristu. (VaGaratiya 6:2) Kana aroorwa anenge ava pasi pomumwe mutemo womurume wake. Achatsigira uye achazviisa pasi pomurume anotadzawo here? Kana achiona zvichizomuomera, zviri nani kuti arege hake kuroorwa.
17 Uyezve, mumwe nomumwe wavo anofanira kuva akagadzirira kuzoita zvinodiwa nomumwe wake. (Verenga VaFiripi 2:4.) Pauro akanyora kuti: “Mumwe nomumwe wenyu ngaadewo mudzimai wake sezvaanozviita; uyewo, mudzimai anofanira kuremekedza murume wake kwazvo.” Afemerwa naMwari, Pauro akaona kuti murume anoda kuremekedzwa zvikuru nomudzimai wake. Uye mudzimai anoda kunzwa kuti anodiwa nomurume wake.—VaEfeso 5:21-33.
Panguva yokudanana vasati varoorana, vakawanda vanoona kuri kuchenjera kuronga kuva nomunhu wechitatu
18. Nei vanhu vari kudanana vachifanira kudzidza kuzvidzora?
18 Saka nguva yamunenge muchidanana musati maroorana haisi yokungonakidzwa. Inguva yokuti mukomana nomusikana vadzidzane, vaone kana zvichiita kuti varoorane. Inguvawo yokudzidza kuzvidzora! Muedzo wokuita zvinoitwa nevanhu vakaroorana zvakadai sokubatana-batana wakasimba, pakuti kukwezvana kwacho kuri muvanhu vose. Zvisinei, vaya vanonyatsodanana vachasiya kuita zvinhu zvinogona kukanganisa ukama huri pakati pemunhu wavanoda naMwari. (1 VaTesaronika 4:6) Saka kana muri kudanana, dzidzai kuzvidzora; zvichakubatsirai kwoupenyu hwose, kunyange kana mukasaroorana.
MUNGAITA SEI KUTI MUCHEMBEDZANE?
19, 20. Maonero anoita muKristu imba anofanira kusiyana papi neevakawanda vari munyika? Ipa muenzaniso.
19 Kana murume nomudzimai vachida kuti vazochembedzana, vanofanira kuziva chinonzi kuzvipira. Nyaya dzemumabhuku nomumafirimu, dzinowanzoguma nokuroorana kunoyemurwa nevanhu vose. Zvisinei, muupenyu chaihwo kuroorana haasi magumo, asi anotova mavambo ezvinhu zvakarongwa naJehovha kuti zvizoramba zviripo. (Genesisi 2:24) Zvinosuwisa kuti haasi iwo maonerwo anoitwa dzimba munyika nhasi. Mune dzimwe nyika, vanhu vanotaura nezvevanhu vanenge vachata vachiti “vasunga pfundo.” Vangasaziva kuti muenzaniso iwoyo unotsanangura nomazvo maonerwo anoitwa dzimba nevakawanda nhasi. Unodaro sei? Pfundo rakanaka rinofanira kunge rakasimba parinenge richiri kudiwa, asiwo kana risisadiwe rinofanira kuva nyore kusunungura.
20 Vakawanda nhasi vanoona imba sechinhu chenguva pfupi. Havazezi kudzitanga nokuti vanofunga kuti vachawana zvavanoda, asi vanenge vachiti vanozodzisiya kana zvinhu zvikaita sezvaoma. Zvisinei, yeuka kuti Bhaibheri rinoti kubatanidzwa kunoitwa vanhu pakuroorana kwakafanana netambo. Tambo dzinoshandiswa pangarava dzomugungwa dzakagadzirirwa kuti dzigare kwenguva refu, dzisingarudunuki, kunyange kukaita madutu anotyisa. Saizvozvowo, kuroorana kwakarongwa kuti kugare kwenguva refu pasinei nematambudziko angavapo. Yeuka kuti Jesu akati: “Ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari.” (Mateu 19:6) Kana ukaroora kana kuroorwa, unofanira kuona imba saizvozvo. Kuzvipira kwakadaro kunoita kuti imba ireme here? Kwete.
21. Murume nomudzimai vanofanira kuonana sei, uye chii chichavabatsira kudaro?
21 Murume nomudzimai vanofanira kugara vachinzwisisana. Kana mumwe nomumwe achitarisa zvakanaka zvinoitwa nomumwe, imba inobva yanakidza uye ichipa zororo. Kutadza kuona zvinhu sezvazviri here kusarudza kuona zvakanaka chete pane zvinoitwa nomumwe wako anotadzawo? Jehovha anoona zvinhu sezvazviri, asi tinovimba kuti acharamba achingotarisa zvakanaka chete pane zvatinoita. Munyori wepisarema akabvunza kuti: “Haiwa Jah, kudai maitarira kukanganisa, haiwa Jehovha, ndiani aizomira?” (Pisarema 130:3) Murume nomudzimai vanofanira kuonana saizvozvo.—Verenga VaKorose 3:13.
22, 23. Abrahamu naSara vakaratidza sei muenzaniso wakanaka kuvanhu vakaroorana nhasi?
22 Imba inogona kuunza mufaro uye kugutsikana sezvainoramba yakamira nokufamba kwemakore. Bhaibheri rinotiudza nezveimba yaAbrahamu naSara pavakanga vachembedzana. Hazvirevi kuti upenyu hwavo hwakanga husina matambudziko. Funga kuti Sara, mukadzi akanga ava nemakore anenge 60, akanzwa sei kusiya musha wakanaka muguta rakabudirira reUri achinogara mumatende kwoupenyu hwake hwose. Asi akazviisa pasi pomurume wake somusoro. Somukwanisi nomubatsiri wechokwadi waAbrahamu, akamubatsira neruremekedzo kuti zvaaironga zvibudirire. Uye aisangomuremekedza zvokubata kumeso. Kunyange “mumwoyo” aiti ishe achireva murume wake. (Genesisi 18:12; 1 Petro 3:6) Airemekedza Abrahamu zvichibva mumwoyo.
23 Hazvirevi kuti Abrahamu naSara vaibvumirana pane zvinhu zvose. Pane pamwe pakataurwa naSara zvinhu ‘zvisina kumbofadza’ Abrahamu. Kunyange zvakadaro Abrahamu, audzwa naJehovha, akazvininipisa akateerera mudzimai wake, izvo zvakazoita kuti mhuri yavo ikomborerwe. (Genesisi 21:9-13) Varume nemadzimai nhasi, kunyange vava nemakore vakaroorana, vanogona kudzidza zvakawanda pamhuri iyi yaitya Mwari.
24. Dzimba dzakaita sei dzinokudza Jehovha Mwari, uye nei?
24 Muungano yechiKristu, mune zviuru nezviuru zvedzimba dzinofara, dzine madzimai anoremekedza varume vavo zvikuru, varume vanoda uye vanokudza madzimai avo, uye vose vachishanda pamwe chete kuti vaise kuda kwaJehovha pakutanga pazvose zvavanoita. Kana wafunga zvemba, sarudza wokuroorana naye nokuchenjera, nyatsogadzirira, uye iva nechinangwa chokuva neimba ine runyararo norudo, uye inokudza Jehovha Mwari. Kana zvikadaro zvechokwadi imba yenyu ichakubatsirai kuramba muri murudo rwaMwari.
^ ndima 11 Ona chitsauko 2 chebhuku rinonzi Chakavanzika Chomufarwa Wemhuri, rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 12 Vamwe vaHebheru vekare vakatendeka vaisava nomudzimai mumwe chete. Jehovha, paainamatwa nevarume ava uye norudzi rwevaIsraeri, akavasiya vachiita barika. Haana kuvaudza kuti variite, asi akapa mirayiridzo nezvaro. Zvisinei, vaKristu vanoziva kuti Jehovha haachabvumiri vanamati vake kuva nebarika.​—Mateu 19:9; 1 Timoti 3:2.
Vakai Imba Yakasimba Uye Inogara Ichifara
Shandisai zvinhu zvishanu pakuvaka imba yakasimba uye inogara ichifara.
“Rambai Muchifamba Murudo”
VaKorinde Wokutanga inoratidza nzira 14 dzatingaratidza nadzo rudo.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuroorana Chipo Chinobva Kuna Mwari Ane Rudo
Murayiro Wokuroorana “munaShe Chete” Uchiri Kushanda Here?